Blockchain စကားဝိုငျး Tickets, Fri, Jun 21, 2019 at 5:30 PM | Eventbrite
5:30 PM – 8:00 PM Myanmar Time Myanmar (Burma) Time
10th Floor, Royal River View Condo, 628/636 Merchant Road
Blockchain စကားဝိုငျး Webinar + Roundtable Discussion
**Unicode and English Below**
Blockchain ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြားလိုက်ရုံနဲ့ bitcoin နဲ့ ဆက်စပ်တွေးမိကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် bitcoin ဆိုတာ blockchain နည်းပညာကို အဦးဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့ အရာပဲဖြစ်ပြီး blockchain ကို cryptocurrency လောကတွင်သာမက အခြားနယ်ပယ်များတွင်လည်း ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းများစွာနှင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့် ဖန်တီးရာကနေ လာမယ့် ဇွန်လ ၂၁ရက်နေ့မှာ “Blockchain စကားဝိုင်း" ဆိုတဲ့ပွဲလေးကို ပြုလုပ်ပေးသွားမှာပါ။ ဒီပွဲမှာတော့ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးဖလှယ်နိုင်မယ့် webinar အစီအစဉ်တွေနှင့် panel ဆွေးနွေးမှုတွေ ပါဝင်မှာဖြစ်လို့ တက်ရောက်သူများအနေနှင့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မျိုးစုံမှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ blockchain နည်းပညာသစ် အကြောင်းနှင့် ၎င်းကို မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာကို လေ့လာသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လာရောက်သူများအတွက် tea break အစီအစဉ်လည်းပါဝင်တာကြောင့် ပွဲတက်ရောက်ရင်း blockchain စိတ်ဝင်စားသူအချင်းချင်း မိတ်ဆက်တွေ့ဆုံနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးလည်းရှိတာမို့ [link] မှာ အခုပဲ အခမဲ့စာရင်းပေးသွင်းလိုက်ပါ။
နေ့ရက် : ဇွန်လ ၂၁ရက်၊ ၂၀၁၉
အချိန် : ညနေ ၅:၃၀ မှ ၈:၃၀ နာရီ
နေရာ : ဖန်တီးရာ
Blockchain ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကွားလိုကျရုံနဲ့ bitcoin နဲ့ ဆကျစပျတှေးမိကွမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ bitcoin ဆိုတာ blockchain နညျးပညာကို အဦးဆုံးအသုံးပွုခဲ့တဲ့ အရာပဲဖွဈပွီး blockchain ကို cryptocurrency လောကတှငျသာမက အခွားနယျပယျမြားတှငျလညျး ပိုပွီးစိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတဲ့နညျးလမျးမြားစှာနှငျ့ အသုံးပွုနိုငျပါသေးတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဖနျတီးရာကနေ လာမယျ့ ဇှနျလ ၂၁ရကျနမှေ့ာ “Blockchain စကားဝိုငျး" ဆိုတဲ့ပှဲလေးကို ပွုလုပျပေးသှားမှာပါ။ ဒီပှဲမှာတော့ အပွနျအလှနျဆှေးနှေးဖလှယျနိုငျမယျ့ webinar အစီအစဉျတှနှေငျ့ panel ဆှေးနှေးမှုတှေ ပါဝငျမှာဖွဈလို့ တကျရောကျသူမြားအနနှေငျ့ လုပျငနျးနယျပယျမြိုးစုံမှာ အသုံးပွုနိုငျတဲ့ blockchain နညျးပညာသဈ အကွောငျးနှငျ့ ၎င်းငျးကို မွနျမာနိုငျငံဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုအတှကျ ဘယျလိုအကြိုးရှိရှိအသုံးခနြိုငျမလဲဆိုတာကို လလေ့ာသိရှိနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
လာရောကျသူမြားအတှကျ tea break အစီအစဉျလညျးပါဝငျတာကွောငျ့ ပှဲတကျရောကျရငျး blockchain စိတျဝငျစားသူအခငျြးခငျြး မိတျဆကျတှဆေုံ့နိုငျမယျ့ အခှငျ့အရေးလညျးရှိတာမို့ အခုပဲ အခမဲ့စာရငျးပေးသှငျးလိုကျပါ။
နရေ့ကျ : ဇှနျလ ၂၁ရကျ၊ ၂၀၁၉
အခြိနျ : ညနေ ၅:၃၀ မှ ၈:၃၀ နာရီ
နရော : ဖနျတီးရာ
When we hear the buzzword “blockchain”, bitcoin is often the first (and sometimes only) thing that comes up to our minds.
But bitcoin is just the first use case of blockchain technology and the applications of blockchain actually go way beyond cryptocurrencies.
Phandeeyar proudly presents “Blockchain စကားဝိုငျး”.
Through an interactive webinar session and panel discussion, you will get the opportunity to learn more about the applications of this revolutionary technology across different industries and the pivotal role blockchain can play in aiding Myanmar on its path to development. Plus, refreshments will be served and you will get to network with fellow blockchain enthusiasts.
Organizer of Blockchain စကားဝိုငျး
Blockchain စကားဝိုငျး at Phandeeyar
10th Floor, Royal River View Condo, 628/636 Merchant Road, Between 29th and 30th Streets,, Yangon, Yangon Region, Myanmar
Wed, Feb95:30 AM
Sun, Jan 30 1:30 AM
Wed, Feb25:30 AM